ठगिएका पीडित भन्छन्- ‘वैदेशिक रोजगार विभाग र ठग म्यानपावरको मिलमतो छ !’ (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु समाधान गर्ने निकाय हो । तर, आज विभागकै कारण पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । विभाग धाएर थाकिसकेका पीडितहरु विभागका कर्मचारीहरुले गर्ने गरेको व्यवहारले आजित छन् । त्यसमाथि निरन्तर र छिटो छिटो भइरहने कर्मचारीहरुको सरुवाले पनि धेरै पीडितहरु थप पीडित बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक नयाँ महानिर्देशकसहितको कर्मचारीसंग गुनासो लिएर पुगेका पीडितहरु थप गुनासो बोकेर विभागबाट फर्कने गरेका छन् । पीडितहरुले महानिर्देशक डिजीसहितका उच्च पदस्थ तथा जिम्मेवार पदााधिकारीहरुले आफुहरुलाई हप्काउने र थर्काउने गरेको गुनासो लिएर न्यूज २४ सम्म आइपुगेका छन् ।
विभाग पीडितलाई हप्काउनका लागि खडा भएको निकाय नभइ वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि स्थापना गरिएको अधिकारप्राप्त निकाय हो । वैदेशिक रोजगारीबाट ठगिएकाहरु न्याय पाउने र आफुहरुको डुबेको रकम उठ्ने आशामा विभाग पुग्छन् । तर पीडितहरु विभागको झन्झटिलो प्रावधानमात्र नभइ कर्मचारीको व्यवहारले पनि आजित बनेका छन् । तर यता विभागका कर्मचारीहरुले भने गुनासो लिएर आउने पीडितहरु तत्काल माग पूरा हुनु पर्ने आशामा आउने गरेको बताउछन् । आफुलाई कस्ले ठगेको हो भन्ने समेत थाहा नपाएकाहरु विभाग आएर छुमन्तरमा काम हुनु पर्ने दबाब दिदा उल्टै कर्मचारी मारमा परेको उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्व-महानिर्देशकहरुको त्यो प्रयास
यसअघिका दुवै महानिर्देशक डिजीले पीडितलाई म्यानपावरले राखेको बैंक धरौटी रकमबाटै क्षतिपूर्ति दिन कदम चालेका थिए । उनीहरुले बैंकलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि निर्देशन दिएका थिए । यही निर्देशनपछि पीडित क्षतिपूर्ति पाइने आशमा बैंक पुगे । तर बैंकले विभागका हाकिमसँग कुराकानी भइसकेको छ उतै जानु भनेर पठाउन थाल्यो । त्यसपछि पीडितहरु विभाग आउने, जाने र बैंक धाउँने क्रममै दुवै डिजी विभागबाट बाहिरिए । र, अहिले फेरि पीडितहरु क्षतिपूर्तिकै लागि विभाग धाइरहेका छन् ।
पहिलेका डिजीले म्यानपावरले राखेको धरौँटी रकमबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेर बैंकलाई पत्राचार गर्दा बैंकले पीडितलाई ‘विभागका हाकिमसँग कुरा भइसकेको छ उतै जानु’ भनेर भन्नुको पछाडि बैंक र डिजीले नयाँ धन्दा चलाइरहेका त छैनन् ? भनेर सजिलै लख काट्न सकिन्छ । नत्र पीडितलाई यतिधेरै तड्पाउनुको पछाडि के छ त ?
दिएको रकम फिर्ता हुँदैन : म्यानपावर
खड्का म्यानपावर, विभाग र बैंक गरि तीनै पक्षबाट पीडित छन् । २०७५ माघ १५ गते मिरुवा म्यानपावरबाट चेक रिपब्लिक जान एप्लाई गर्छन् । म्यानपावरले भनेबमोजिम नै २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पनि बुझाउँछन् । तर, २ महिनामा विदेश उडाउँछु भनेको म्यानपावरले विदेश नलगेपछि उनले रकम फिर्ता माग्छन् । म्यानपावरले दिएको रकम फिर्ता हुँदैन भनेपछि उनीसहित साथीहरु विभागसमक्ष पुग्छन् । विभागका तत्कालीन डिजी कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगार नियमअनुसार विभागमा म्यानपावरले संस्था चलाउँदा बुझाएको धरौँटी रकमबाटै क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन हाल्न भन्छन् । त्यसैअनुसार निवेदन हालिन्छ । तर निरजलाई उही निराशाबाहेक केही हात लाग्दैन ।
बैंकहरुद्वारा बहानाबाजी, पीडितको रकम दिन आलटाल
पीडितहरु थाक्दैन र बारम्बार प्रयास भने गरिरहन्छन् । उनीहरु विभागको पत्र लिएर बैंक पुग्छन् । बैंकले १५ दिनपछि आउनुस् रकम दिन्छौँ भन्छ । तर, पीडितले क्षतिपूर्ति नै नपाई कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुन्छ । लकडाउन खुला भएपछि पीडितहरु बैंक जान्छन् तर, बैंकले पनि बिभिन्न वहानावाजी बनाएर टारेर पठाउँछ ।
क्षतिपूर्ति दिलाउने बाचा गरेका डिजी दाहाल सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा कृष्णप्रसाद दवाडी आए । दवाडीले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै दुई हप्तापछि आउन भन्छन् । त्यसपछि गाउँमा रहेका सबै साथीहरुलाई दुई हप्तापछि आउन निरजले फोनमार्फत् भन्छन् । तर, त्यो समयअगावै दवाडीले अवकाश पाउछन् । त्यसपछि डिजी भएर आएका दीपक काफ्लेले भने आफुसंग पूरानो कुरा नगर्न र नयाँ कुरा मात्र गर्न भनेपछि पीडितहरु थप अलमलमा पर्छन । त्यसमाथि सूचना अधिकारी कमल ज्ञवाली त बोल्नै चाहन्नन् ।
गाउँबाट ऋण काँढेर काठमाडौं आएका निरजका साथीहरु होटेलमा छन् । घरबाट ल्याएको पैसा सकिएको छ । भाइरल ज्वरोले केही साथीहरु ग्रस्त छन् । दरिलो उपचार गर्न सकेका छैनन् ।
ठगिनेहरु कम छैनन्, तर क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्
निरजजस्तै पार्वती सिलवाल पनि मिरुवा म्यानपावरलाई विदेश जान २०७६ साल साउन २७ गते डेढ लाख बुझाउछन्, दिक्पाल नामक दलाललाई । म्यानपावरले ५ लाख मागेको तर, सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि दिने सर्तसहित डेढ लाख बुझाएको उनी बताउँछन् । तर, पछि म्यानपावर फरार भएपछि विभागमा उनले पनि मुद्धा हालिन् । म्यानपावर भागेको अवस्थामा धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिइने भएपछि अहिले म्यानपावरसँग सरोकार पनि भएन । केवल विभागले नै पीडितलाई धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले म्यानपावरको धरौटी राख्ने प्राइम बैंक र विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनभन्दा पनि थप पीडा दिएर राखेका छन् ।
सोझासाझा फसाउन दलालका अनेक रूप
पार्वतीजस्तै शारदा लामा एयरपोर्टमा होटेल चलाउँदै आएकी थिइन् । पार्वतीलाई फसाउने तिनै दिक्पाल नामक दलाल शारदाको होटेलमा आउँथे, खान्थे र कुराकानी गर्थे । श्रीमानसँग सम्बन्ध सुमधुर थियो । श्रीमतीलाई थाहै नदिई श्रीमानले दिक्पाललाई विदेश जान बाहिर बाहिरै ८ लाख रकम बुझाएका रहेछन् । दिक्पालले आफ्नो भाइ र श्रीमानलाई अरुलाई भन्दा सस्तोमा पठाउँछु भनेर आफूलाई भनेको शारदा सुनाउछिन् ।
युरोपको सपना र साउदीको रोजगारी
यस्तै, प्रवीण क्षेत्री पनि चेक रिपब्लिका जान भनि यहीँ म्यानपावरसँग ठोक्किए । साउदीबाट युरोपियन मुलुक जान नै उनी नेपाल आएका थिए । नेपाल आएपछि दाजुभाइसँग छलफल भयो । अन्तमा चेक रिपब्लिक जाने निधो भयो । र, पासपोर्टसहित ५० हजार म्यानपावरलाई बुझाए । दिल्लीको बाटो हुँदै जाने भनेर अफर लेटर पनि देखाइयो । त्यसपछि उनीसहित दुई जना पनि जाने भए । उनले २ लाख बुझाए । तर, म्यानपावरले पैसा बटुलेर फरार भयो ।
त्यसपछि प्रवीण पनि विभाग पुगे । क्षतिपूर्तिको आशा लिएर विभाग पुगेका प्रवीणसहितको ५ जनाको टोलीको निवेदन दर्ताका लागि प्रत्येकको डकुमेन्टको फोटोकपी मागियो । तर उस्तै नियति उनीहरुले पनि भोगिरहेका छ्न् ।